I-KDEApps4: Izicelo Zomphakathi ze-KDE Zokuphathwa Kwe-inthanethi | Kusuka kuLinux
I-KDEApps4: Izicelo Zomphakathi ze-KDE Zokuphathwa Kwe-inthanethi
Ukufaka kwe-Linux Post | 06/09/2021 06:00 | Aplicaciones, I-GNU / Linux
Namuhla, siyaqhubeka ne- ingxenye yesine «(I-KDEApps4) » kusukela ochungechungeni lwezihloko ku "Izinhlelo zokusebenza zomphakathi ze-KDE". Ukuze wenze kanjalo, qhubeka uhlole ikhathalogu ebanzi futhi ekhulayo ye- izicelo zamahhala nezivuliwe ithuthukiswe yibo.
Ngaleyo ndlela, ukuqhubeka nokwandisa ulwazi olumayelana nabo kubo bonke abasebenzisi ngokujwayelekile I-GNU / Linux, ikakhulukazi labo okungenzeka ukuthi kabasebenzisi «I-KDE Plasma » njengoba «Imvelo Yedeskithophu» main noma yedwa.
Okwalabo abanentshisekelo yokuhlola i-3 yethu yangaphambilini okushicilelwe okuhlobene nesihloko, ungachofoza kusixhumanisi esilandelayo, ngemuva kokuqeda ukufunda le ncwadi:
1 I-KDEApps4: Izicelo zokuphathwa kwe-Intanethi
1.1 I-Intanethi - Izicelo ze-KDE (KDEApps4)
I-KDEApps4: Izicelo zokuphathwa kwe-Intanethi
I-Intanethi - Izicelo ze-KDE (KDEApps4)
Kule ndawo yokuxhuma ku Internet, lo "Umphakathi we-KDE" ithuthukiswe ngokusemthethweni Izicelo ezi-22 lapho sizobalula futhi siphawule, ngombhalo nangokufushane, i-10 yokuqala, bese sizokhuluma nge-12 esele:
Isihlanganisi: Ungumfundi wemithombo yezindaba, ekuvumela ukuthi ulandele izingosi zezindaba, amabhulogi namanye amawebhusayithi ane-RSS / Atom enikwe amandla, ngaphandle kwesidingo sokuhlola izibuyekezo ngesandla ngesiphequluli sewebhu.
Alligator: Kungumfundi weselula wemisakazo yewebhu.
Banji: Yiklayenti yokuqhafaza yesikhulumi sezokuxhumana ngeRing (www.jami.net). Ingasetshenziswa njengesicelo esijwayelekile sokuxhumana nabanye abasebenzisi beRing noma njengefoni yesoftware yeVoIP ehambisana nemboni ejwayelekile ye-SIP esetshenziswa izingcingo eziningi zasehhovisi.
Choqok: Yiklayenti le-microblogging elisekela i-Twitter.com, i-GNU Social, Pump.io kanye nezinsizakalo ze-Friendica.
Umthumeli we-PIM wedatha: Kuyinsiza ekuvumela ukuthi uthumele futhi ungenise okuncamelayo kwe-PIM (Personal Information Management).
UFalkon: Isiphequluli sewebhu esisha futhi esisheshayo. Ihlose ukuba yisiphequluli sewebhu esingasindi esitholakala kuwo wonke amapulatifomu athandwa kakhulu. Le phrojekthi ekuqaleni yaqalwa ngezinjongo zokufunda. Noma, kusukela ekuqaleni, uFalkon uguquke waba yisiphequluli esinezici eziningi.
Kaidan: Yiklayenti elilula futhi elinobungani leJabber / XMPP elihlinzeka ngesixhumi samanje esisebenzisa iKirigami neQtQuick. Injini kaKaidan ibhalwe ngokuphelele ku-C ++ futhi isebenzisa umtapo wolwazi wamakhasimende we-XMPP "qxmpp" ne-Qt 5.
UKasts: Kuyisicelo se-podcast sama-mobiles, futhi esisebenza ku-GNU / Linux, ngoba sakhiwe njengesidlali se-podcast esiguqukayo esuselwa ku-Kirigami.
KDE Connect: Kuyithuluzi lesoftware elenza imisebenzi eminingi ukuhlanganisa ifoni nekhompyutha. Ngaphezu kwalokho, ikuvumela ukuthi uthumele amafayela kwamanye amadivayisi, lawula ukudlalwa kwemidiya, uthumele okokufaka okukude, ubuke izaziso zakho nokunye okuningi.
I-KGet: Yimenenja yokulanda eguquguqukayo nenobungane.
Ezinye izinhlelo zokusebenza zakhiwe kule ndawo yokuxhuma ku- Internet ngu "Umphakathi we-KDE" Yilezi:
I-Kirogi: Ukulawulwa komhlaba kwe-Drone.
KonquarkIsiphequluli sewebhu, imenenja yefayela nesibukeli.
Izingxoxo: Iklayenti le-IRC.
Kopete: Imiyalezo esheshayo.
I-KRDC: Iklayenti ledeskithophu ekude.
I-Krfb: Kwabiwe Ideskithophu (VNC).
Isiphequluli sewebhu se-Angelfish: Itilosi leWebhu.
I-NeoChat: Iklayenti le-Matrix.
URuqola: Iklayenti leRocket.Chat.
Ibha yesikhala: Isicelo se-SMS.
Ucingo: Thumela futhi wamukele izingcingo.
Ngamafuphi, lesi yisampula ukubuyekeza kwesine "(KDEApps4)" kwezicelo ezisemthethweni ezikhona ze- "Umphakathi we-KDE", ekhuluma nalabo abasemkhakheni wokuxhuma ku- Internet. Ngakho-ke, siyethemba ukuthi izosebenza ekwaziseni nasekusebenziseni okunye kwalokhu Izinhlelo zokusebenza mayelana ahlukahlukene I-GNU / Linux Distros. Futhi lokhu nakho, kunomthelela ekusetshenzisweni nasekukhulisweni kwezinto ezinjalo ezinamandla nezinhle isoftware yamathuluzi muhle futhi usebenza kanzima Umphakathi weLinuxera usinikeza sonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-KDEApps4: Izicelo Zomphakathi ze-KDE Zokuphathwa Kwe-inthanethi
UMATE 1.26 ufika nokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza, ukuxhaswa kweWayland nokuningi